Ọdụdọ Ọdụdọ igwe eletriki igwe - China Electrical Discharge Machine Manufacturers, Suppliers
Omenala Input gosiri Power EDM ebua Erosion Machine With 150 * 350mm Magnet Chuck
Nlereanya: CNC1470N Isiokwu Njem: 1400 * 700 * 500mm Size Of Container Container: 2250 * 1300 * 650mm Size Isiokwu: 1500 * 900mm Max. Ibu Of Eletrode Head: 400kgs Net arọ: 8000kg 1000 * 600 * 450mm table njem CNC EDM igwe maka ebu nhazi CNC 1060N 1.Ezigbo ime ụlọ ime ụlọ, na-eji PCB imewe maka ịgbatịkwu ọrụ ndụ, ọrụ nchekwa na mmezi dị mfe. 2. Mgbe ị na-arụ ọrụ ruo omimi miri emi, ọ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka usoro nhazi dị mma. 3. Esemokwu na-eguzogide PC mkpa ...
Ezi kwụsie ike Atọ Axis ZNC EDM Machine Na 200kg Max Load Of Electrode Head
Isiokwu Size: 1050 * 600mm Electrode Head: 400mm Max Load Of Electrode Head: 200kg Size Of Oil Container: 1650 * 1100 * 630kg Net Weight: 2950kgs Model: ZNC-650 Isiokwu Travel: 650 * 550 * 250mm Max Ibu Isiokwu: 2000kg Anụ na a pụrụ ịdabere na àgwà ZNC540 electric orùrù igwe maka ebu nhazi 1.More karịa afọ iri abụọ na ahụmahụ nke ụlọ ọrụ na ngwaahịa 2.All ụdịISO9001: 2015 3.High aha gburugburu ụwa 4.Professional service and technology support 5.Competitive price with bette ...
High Cutting Speed ​​ZNC Waya Cut EDM With Electric Cabinet 300 * 200 * 180 Mm
Aha: ZNC EDM Die Sinking Machine Isiokwu Size: 600 * 300mm X / Y / Z Axis Travel: 300 * 200 * 180 Mm Electrode Head: 180mm Max Load Of Table: 1200kg Curret: 50A Net Weight: 1500kg njikwa Axis No.: Z Axis Control Ugbu a 50A Cutting Speed ​​ZNC EDM Die Sinking Machine Isiokwu Size 600 * 300mm1.For 50A njikwa, o nwere 19 nzọụkwụ, iche iche machining ụzọ nwere ike ona dị iche iche ndị ahịa chọrọ. 2.Automatic compute, ntupu na ukpụhọde - N'ihi na n'ozuzu machining, mgbe ntinye ugbu a, c ...
Metal cha CNC EDM Machine Kwụsie CNC ebua Sinker EDM Machine CNC50G
Nlereanya: CNC-50G Nha Isiokwu: 850 * 450mm Size Of Container Container: 1370 * 720 * 450mm X / Y / Z Axis Travel: 500 * 400 * 300mm Max.load Of Electrode Head: 150kg Max.load Of Table: 1800kg Net Ibu: 2500kg Akụkụ: 2300 * 2770 * 2650mm arụmọrụ enyo igwe eletrik eletriki igwe CNC-50G maka nhazi ebu 1. Igwe akụrụngwa akụrụngwa nwere mgbatị dị elu nke resin sand stress na-ebelata. 2. N'ịnabata nkenke CAD imewe na elu nkenke etiti Ọdịdị. 3. X, Y axles ije n'elu ya na "TU ...
JOINT ZNC Micro Waya EDM Machine Nwụrụ Sịlị Ime Ebu Ebu ZNC-700
Nlereanya: ZNC-700 X / Y / Z Axis Travel: 700 * 550 * 250mm Size Of Container Container: 1650 * 1100 * 630mm Size Isiokwu: 1050 * 600mm Max. Ibu Of Isiokwu: 2000kgs Net arọ: 2950kg Electrode Head: 380mm Dimension: 2000 * 1710 * 2360mm Electric Discharge Machine ZNC-700 1.Have function as Automatic Monitoring Level, Infra-red flame nchọpụta, omimi mkpu na igbupụ ọkụ eletrik, na-achọta etiti etiti. 2. ịmụta MOSFET electrocircuit, na elu na-agba nhazi 3. Withpositive-adịghị mma mgba ọkụ fu ...
Ultra Fine Mkpa Procssing CNC EDM Machine 700 * 400mm Isiokwu Size CNC450
Nlereanya: CNC-40G Nha Isiokwu: 700 * 400mm Size Of Container Container: 1130 * 710 * 450mm X / Y / Z Axis Travel: 400 * 300 * 300mm Max.load Of Electrode Head: 620kg Max.load Of Isiokwu: 1000kg Net Arọ: 2000kg Dimension: 2050 * 2530 * 2400mm arụmọrụ enyo igwe eletrik eletriki igwe CNC-40G maka nhazi ebu 1. Stable for ultra high preidion ebu na akụkụ nhazi. 2. U-klas elu mma àjà ihe ọ -ụ -ụ-mma elu procssing, ala ọnwụ, elu imecha. 3. Eji maka nhazi mgbagwoju curved akụkụ, nkenke ...
HIgh Accuracy Industrial ebua ebu Erosion Machine 17000 Kilogram Net arọ
Nlereanya: CNC2590N Isiokwu Njem: 2500 * 900 * 600mm Size Of Container Container: 3800 * 1800 * 650mm Size Isiokwu: 2700 * 1200mm Max. Ibu Ibu Isiokwu: 10000kgs Net Weight: 17000kg CNC EDM igwe CNC2590N 1.Ha arụ ọrụ dị ka ọkwa nyocha akpaaka, nchọpụta ọkụ ọkụ Infra-red, mkpu miri emi ma belata ọkụ eletrik, na-achọta ebe etiti. 2. Adomụta MOSFET electrocircuit, na nhazi ọsọ ọsọ 3. Nwee ọrụ mgbanwe na-adịghị mma. Enwekwara ike ịgbakwunye ọrụ ịlụ ọgụ na proce ...
3890 * 4400 * 3580mm Electronica EDM Ngwa igwe nchacha ngwa ngwa
Nlereanya: CNC1880N Isiokwu Njem: 1800 * 800 * 600mm Size Of Container Container: 3000 * 1500 ** 650mm Size Isiokwu: 2000 * 1000mm Max. Ibu Of Isiokwu: 6500kgs Net arọ: 13000kg CNC EDM igwe CNC1880N 1.Ha arụ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Automatic Monitoring Level, Infra-red flame detecting, omimi mkpu na igbupụ ọkụ eletrik, na-achọta Central isi. 2. Nabata igwe eletriki MOSFET, na nhazi ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, na obere mfu nke electrode 3. Nwee ọrụ mgbanwe na-adịghị mma. Anti-Fightin ...
Automatic CNC EDM Machine 4340 * 4900 * 3590mm With 8000kgs Max Load Of Isiokwu
Nlereanya: CNC2110N Isiokwu Njem: 2300 * 900 * 600mm Size Of Container Container: 3500 * 1800 * 650mm Size Isiokwu: 2500 * 1200mm Max. Ibu Of Isiokwu: 8000kgs Net arọ: 15000kg CNC EDM igwe CNC1880N 1.Ha arụ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Automatic Monitoring Level, Infra-red flame nchọpụta, omimi mkpu na igbupụ ọkụ eletrik, na-achọta Central isi. 2. Nabata igwe eletriki MOSFET, na nhazi ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, na obere mfu nke electrode 3. Nwee ọrụ mgbanwe na-adịghị mma. Na-alụ ọgụ ...
Atọ Axis CNC EDM Machine, 2000 * 1300 * 700mm Mmanụ Mmanụ akpa EDM tingcha Machine
Nlereanya: CNC1260N Isiokwu Njem: 1200 * 600 * 450mm Size Of Container Container: 2000 * 1300 * 700mm Size Isiokwu: 1250 * 800mm Max. Ibu Of Eletrode Head: 300kgs Net arọ: 5500kg atọ Axis CNC EDM Machine, 2000 * 1300 * 700mm Oil Container EDM Cutting Machine 1.High rigidity, elu kpọmkwem, elu mma. 2. Mgbe ị na-arụ ọrụ ruo omimi miri emi, ọ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka usoro nhazi dị mma. 3. ngwa eletriki niile bụ ezigbo ọrụ yana ogo 4.For omimi dị na-agbanweghi agbanwe, bụrụ ...
2000L ikike CNC EDM Machine, Industrial PC njikwa Electric ebua Machine
Dị ihe atụ: CNC850N Isiokwu Njem: 800 * 500 * 400mm Modeldị :dị: CNC EDM Ngwa Ngwa Ngwa Ihe Mmanụ: 1650 * 1100 * 600mm Nha Isiokwu: 1000 * 600mm Max. Ibu Of Eletrode Head: 200kgs 1000 * 600mm Isiokwu size EDM CNC850N igwe na ulo oru PC njikwa 1. niile nlereanya machining ụzọ nwere ike ona dị iche iche ndị ahịa chọrọ. 2. Mgbe ị na-arụ ọrụ ruo omimi miri emi, ọ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka usoro nhazi dị mma. 3. Automatic compute, ntupu na ukpụhọde - N'ihi na n'ozuzu machining, ...
Akpaka Ọkụ na-ebucha CNC Sinker EDM Na 2300 * 2770 * 2650mm Dimension
Nlereanya: CNC540N Isiokwu Njem: 500 * 400 * 300mm Modeldị :dị: CNC EDM Ngwa Mbadamba Igwe: 800 * 450mm Max Ibu Of Isiokwu: 1800kgs Max Load Of Electrode Head: 150kgs Automatic Spark Spi CNC Sinker EDM With 2300 * 2770 * 2650mm Dimension 1 .Various machining ụzọ nwere ike ona dị iche iche ahịa chọrọ. Ihe dị mma nke na-adịgide adịgide ekele na arụ ọrụ arụ ọrụ arụ ọrụ nke na-eme ka anyụike na-aga n'ihu na nkwado ahụ. 3. Automatic compute, ntupu na ukpụhọde - N'ihi genera ...